नेपाल टेलिकमको ५जी सेवाको परीक्षण बारे नोकियाको लागि फिनल्याण्डको चासो - Technology Khabar
» नेपाल टेलिकमको ५जी सेवाको परीक्षण बारे नोकियाको लागि फिनल्याण्डको चासो
सरकारी टेलिकम कम्पनी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)ले परीक्षण गर्न अनुमति पाएको भनिएको फाइभजी सेवा परीक्षणको बारेमा फिनल्याण्डले पनि चासो देखाएको छ।
केहि समयअघि रेडियो फ्रिक्वेन्सी निती निर्धारण समितिले नेपाल टेलिकमलाई मात्र फाइभजी सेवाको परीक्षण गर्न दिने निर्णय सहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई त्यसको लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी लगायतका बारेमा नीतिगत कार्य गर्ने जिम्मेबारीसहित निर्देशन दिएको थियो ।
सोहिअनुसार नेपाल टेलिकमले समेत आफुले ५जी सेवाको परीक्षणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ।
फाइभजी सेवाको परीक्षण नेपाल टेलिकमले मात्र गर्न पाउने, अन्य टेलिकम अपरेटरहरुलाई निषेध !
यसैबिच नेपाल टेलिकमले ५जी को परीक्षण पाउने समितिको निर्णय आएसँगै फिनल्याण्डले समेत चासो देखाएको हो।
सो बारेमा फिनल्याण्डका राजदूतले केहि साता अगाडी टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीसँग भेट गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
फिनल्याण्डका राजदुतले विशेषगरि टेलिकमले आगामी दिनमा गर्ने ५जी सेवाको परीक्षण र त्यसको तयारीको बारेमा जानकारी लिएको स्रोतको दाबी छ।
‘केहि साता अघि फिनल्याण्डका राजदुत आउनुभएको थियो। नोकिया पनि ५जी प्रविधिको बिस्तारमा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धामा रहेको हुँदा सो बारेमा कुराकानी भएको छ,’ स्रोतले आफ्नो पहिचान उल्लेख नगर्ने शर्तमा टेक्नोलोजीखबरलाई भन्यो।
नोकिया कर्पोरेशन फिनल्याण्डको मल्टिनेशनल टेक कम्पनी हो । यसले टेलिकम्युनिकेसन्स, सूचना प्रविधि र कन्जुमर इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रमा काम गर्दछ । सन् १८६५ मा स्थापना भएको नोकियाको मुख्यालय फिनल्याण्डको एस्पुमा रहेको छ । सन् २०१५ मा फ्रेन्च कम्पनी अल्काटेल लुसेन्ट किनेसँगै नोकिया ५जी वायरलेस नेटवर्क बजारमा चिनियाँ कम्पनी ह्वावे टेक्नोलोजीज कम्पनी लिमिटेड र स्वेडिश कम्पनी एरिक्सनसँग प्रतिस्पर्धामा रहेको विकिपेडियामा उल्लेख छ।
नोकियाको लागि फिनल्याण्डले चासो देखाएपनि नेपाल टेलिकमको ४जी सेवाको बिस्तारकै समयमा भएको सम्झौताअनुसार हालकै कम्पनीले नेपालका प्रमुख ४ शहरहरुमा ५जी सेवाको परीक्षण निशुल्क गर्नुपर्नेछ ।
नेपाल टेलिकमले फोरजी सेवाका लागि आवश्यक पर्ने ‘कोर नेटवर्क’ र ‘रेडियो एक्सेस नेटवर्क’ जडानका लागि चिनियाँ कम्पनी जेडटीई कर्पोरेसन र हङकङको सीसीएसआई कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । सो सम्झौताअनुसार नै ४जी सेवा देशभर बिस्तार गरिरहेको छ। तत्कालिन सम्झौताअनुसार ४जी सेवाको बिस्तार सकिएपछि मात्र ५जी परीक्षण गरिने उल्लेख छ।
नेपाल टेलिकमले ५जी सेवाको परीक्षण गर्न अनुमति पाएपनि त्यसको लागि पुरा गर्नुपर्ने प्रकृया र फ्रिक्वेन्सीको उपलब्धतालगायतका कार्यहरु गर्न बाँकी नै छ । जसको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले शर्तसहित अनुमति दिएपछि मात्र परीक्षणको कार्य अघि बढ्नेछ।
२५० रुपैयाँमा २० एमबीपीएस स्पिडको इन्टरनेट महिनाभर चलाउन पाइने
नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवा लाइसेन्सको अन्तिम दिन नविकरण हुन सकेन, अब के हुन्छ ?
सबै मालपोत कार्यालयका सेवा अनलाइन प्रणालीमा लाने